साहित्य Archives - Page3of 83 - NepalDut NepalDut
प्रलेस प्रदेश १ मा तिलाको नेतृत्व
प्रगतिशील लेखक सङ्घ (प्रलेस) प्रदेश नं १ को हालै भएको दोस्रो सम्मेलनले मोरङ बेलबारीकी तिला लेकालीको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नव गठित समितिमा राम खरेल र दिनेश थापा उपाध्यक्ष, राजेन्द्र सर्वहारा सचिव, अशोक खनाल सह–सचिव र सिर्जना सरोवर कोषाध्यक्ष छन् । नवनिर्वाचित समितिका सदस्यमा मायामितु न्यौपाने, खगिन्द्रा खुशी, दिलिप घिमिरे, कविता केशरी, भवानीप्रसाद पोख्रेल, सरस्वती न्यौपाने, उदय भट्टराई, चन्द्रनारायण चौधरी, दुर्गा परियार, घनश्याम ढकाल, इन्द्रनारायण… पुरा पढौ
तीर्थ गुरुङलाई गौरी तमू लेखनवृत्ति पुरस्कार
यस वर्षको ‘गौरी तमू लेखनवृत्ति पुरस्कार आख्यानकार तीर्थ गुरुङलाई प्रदान गरिने भएको छ । कास्कीको मादी गाउँपालिका १, सिक्लेस घर भएका गुरुङलाई मञ्चको ५ औं स्थापना दिवसको दिन चैत २१ गते पोखरामा आयोजना गरिने औपचारिक कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिने भएको हो । पुरस्कारको राशी ३५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ छ । यस पुरस्कारका लागि मञ्चका अध्यक्ष गौरी तमूले ४ वर्ष अगाडि ३ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँको अक्षयकोष… पुरा पढौ
कविता, विद्रोह, राजनीति र नैनाका कविता
आमुख प्रसङ्ग - नैना अधिकारीको नवीनत्तम काव्यकृति 'घात-प्रतिघातका उद्गारहरू' भित्रका कविताहरूको केही विशेष पक्षको विश्लेषण हो। उनको मूल पाठको विश्लेषणको गहिराईमा पौरनेअघि कविता, विद्रोह र राजनीति सन्दर्भका केही कुराहरू कोट्याउन मन लाग्यो। यश लेखमा प्रसङ्गको डोरी समाएर कविता विश्लेषणको क्रममा पनि केही परसम्म तन्किने प्रयास गरेको छु। कविताको परिभाषा, स्वरूप र उद्देश्य सन्दर्भमा पूर्व र पश्चिमका साहित्यसाधक तथा कला समालोचकहरूले धेरैखाले विचार राखेका छ्न्, परिभाषा तोकेका छ्न्। तर यी कुनै… पुरा पढौ
स्थापना दिवसमा अन्तक्रिया र पुरस्कार वितरण
गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालले यही चैत २१ गते पाँचौ स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । हालै भएको मञ्चको बैठकले २१ गते ३ फरक फरक कार्यक्रम गर्ने तय गरेको हो । मञ्चले गुरुङ साहित्य र गुरुङ चलचित्रसम्बन्धी २ अन्तक्र्रिया गर्ने छ भने त्यसपछि स्थापना दिवस मुल समारोह आयोजना हुने अध्यक्ष गौरी तमूले बताइन् । मुल समारोहमा ‘गौरी तमू लेखनवृद्धि पुरस्कार’ प्रदान गरिने छ । मञ्चकी अध्यक्ष गौरीले स्थापना… पुरा पढौ
गण्डकीका जातजातिका नृत्यको अभिलेख राखिँदै
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विभिन्न जातिको नृत्यका बारेमा यतिवेला अनुसन्धान भइरहेको छ । लोपोन्मुख नृत्यको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । गत माघ १ गतेदेखि सुरु भएको अनुसन्धान कार्य चैत मसान्तभित्र सक्ने तयारी गरिएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा अध्ययन अनुसन्धान उपसमिति संयोजक गोरे गुरुङले जानकारी दिए । अनुसन्धानकर्ता अहिले गण्डकीका ११ वटै जिल्ला पुगेर अनुसन्धान सुरु गर्नुभएको छ । यही चैत ३० गतेभित्रमा अनुसन्धान… पुरा पढौ
सहर नजिकैको गाउँमा एकजना किसान बस्थे । त्यहीँ तरकारी पसल गर्ने एकजना पसलेसँग ती किसानको राम्रो सम्बन्ध थियो । उनैले कर गरेको हुँदा किसानले पाँचरुपैयाँको चिट्ठा किने । अहिले यो कुरा उनले बिर्सिसकेका थिए, तर उनलाई दशकरोडको चिट्ठा पर्‍यो । चिट्ठा एजेन्टले सोच्यो जिन्दगीमा दुईचारहजार पनि नदेखेको मानिसलाई यत्रो चिट्ठा परेको छ । अकस्मात्को यो खबरले उनलाई मानसिक असर पर्नसक्छ । यति सोचेपछि उनले एकजना स्थानीय वकिलसँग सल्लाह लिए ।… पुरा पढौ
कविता: नारी दिवसको भोलिपल्टदेखि
अब !बिस्तारै चिसिन थाल्नेछन्हिजो माइकमा फुकिएकाआगो जस्तै शब्दका झिल्काहरूअनि कामिरहने छन्ठिहीलेएकझुन्ड नाराका पोकाहरूसमानताकाअधिकारकानारीका चर्का आवाजहरूपुरुषकास्वीकारोक्तिहरूआँउदो वर्षसम्म काकाकुलको तिर्खा जसरीतिर्खाएका मुद्दाहरूतार्किक ज्वालालेखरानी बनेरउडने छन्फेरि एकपल्टधेरैपल्टपुन: पुन: दोहोरिनेछएउटै इतिहासआँउदो वर्षसम्म फेरि,बिस्तारै बिस्तारैकटमिरो व्यवहार र अपरिमित खल्लोपनमाछछल्किने छन्अस्तिर मुटुका छ्टपटाहटसधैँभरि आधा लेखिएको पुरानो दस्तावेजमानिसङ्कोच नाच्ने छन्शब्दहरूत्यही पुरानो लयमाखोक्रो ढोलकोबेसुरा तालमा नियन्त्रणहीन छ यहाँ दुशासनहरूको शक्ति त्यही भएरएक वर्षपछिफेरि एकपल्टछट्पटाउने छ त्यो भीडसापको काटिएको पुच्छरएकछिनसम्म छट्पटाएझैँ फेरिआलो दुखाइ दुख्नेछझनभन्दा झन चिसिने छ्न् सुस्केराहरूसारा संसारका… पुरा पढौ
कविता: डियर कमरेड
बेथितिलाई थितिले बाँध्ने डोरो नपाएररन्थनिएको छ यो समय ।अपराधीलाई सजाय दिने दण्ड हराएरनिरिह बनेको छ यो कालखण्ड ।गरिखानेका गास कसले खोस्यो ?निर्धाको बास कसले मिच्यो ?सवाल छन् मात्र सवालजवाफ दिने कुनै ओठ छैन ।भय छभोक छतर भरोसा छैन ।पीडा छप्रलाप छकुनै प्रयास छैन ।तिमीले भिरेको हसियाँमा न धार छतिमीले बोकेको हथौडामा न दम छ ।के छ कमरेडकसरी भन्छौअचेल सब ठिकठाक छ ।को दलाल हो ?को हो बुर्जुवा शासक ?को पीडक… पुरा पढौ
राष्ट्रघाती एमसिसी जिन्दावाद !
एउटा बालक घरको पिडिको डिलमा बसेर रोटी खाँदै थियो। रोटी खादा एक टुक्रा आफु खान्थ्यो र अर्को टुक्रा संगै भएको कुखुरालाई दिन्थ्यो। आफ्नो छोराको रोटीको एक टुक्रा आफु खाने र अर्को टुक्रा कुखुरालाई दिएको देखेर बालकको आमाले छोरा लाई सोधिन- यो के गरेको? छोराले सहज उत्तर दियो- चिकन संगै रोटी खाएको। चिकन सगै रोटी खाने यो काईदा स्वादिलो र पौष्टिक् नभए पनि सुन्दा क्या स्वादिलो! नेपालमा प्रचण्ड, माकुने, कग्रेस र… पुरा पढौ
कथा: आमाको वरिपरि
आजको अनलाइन पत्रिका, ‘बाह्रखरी’ मा मेरो कथा छापिएको थियो । ‘बरखी’ शीर्षकको कथा ।बहिनी सीताले भनी, ‘आजकल त हजुरका कथा खूब छापिन थालेका छन् । आज पनि छापिएको रहेछ ।’ म, आमा र ऊभित्र बसिरहेका थियौ । आमा खाटमा लुगा ओढेर बस्नुभएको थियो । म र सीता सोफामा थियौं। मैले भने, ‘यो कथा राम्रो छ, पढेर आमालाई सुनान ।’‘पर्दैन सुन्दिनँ, आफ्ना कथा कसले सुन्दियोस्,’ आमा त्यत्तिकै टक्टकिएर भन्नुभयो । ‘आमाको… पुरा पढौ